Baqqaanootni Fakkasaa LibreOffice keessaatti malee Impress LibreOffice keessatti hin aragamuu. Baqqaanootni fuula walfakaatan irratti maalimoota akka gurmeessitu hayyama. Baqqaannoota, mul'annoo, maxxansuu, ykn cufuu irraa akka iddoo hojii dhuunfaatti dhooksu dandeessu yaadi.
Baqqaanootni, baqqaana Too'atamtootaa Too'annoobaqqaanoota birroo fuldurartti argamanif yoo ta'e male tatiba sadarkaa wantoota fuularratti hin ibsu.
Sadarkaan tartiiba wantoota fuula keetiirraa, haala tartiiba wantoota dabalatee sanaan ibsama. Fooyyeessi - Qindeessi fayyadamuun sadarkaa tartiiba wantoota qindeessu dandeessa.
Bal'ini baqqaana irra jiru fi wantoota of keessatti hin hammane dabarsoo ifaa dha.
Fakkasaan LibreOffice baqqaanoota durtii sadii laata:
Baqqaanoota durtii haqu ykn maqaajijjiiruhin dandeessu. Saagi - Baqqaan kan jedhuun baqqaana ofi keetii dabalu dandeessa.
Teessuma baqqaana Iddoo hojii durtiitti. Teessumma baqqaana, iddoo mataduree, barruu fi iddooqoota wanta fuula irraa ibsa.
Baqqaani Too'atamtootaa qabduulee ramaddamani fi gochaa ta'ani garuu maxxanfamuu hin dandeenyeef fayyaduu. Amaloota baqqaana akka maxxanffamuu hi dandeenyeetti qindeessi. Wantootni baqqaana Too'atamtootaarraa jiran yeroo hunda wantoota baqqaani birooratti argamaniin fuuduraatti jirraatu.
Baqqaani Sararoo Bal'innaa fi dheerinaa iddoo itti fakkii kaastuutti argamu, fakkeenyaaf sararoota bal'ina fi dheerinaa. Baqqaana kana jijjirudhaan mul'isn ykn dhooksuun, haala salphaan sararoota kana cufu fi banuu dandeesssa.
Title is: Waa'ee Baqqaanaa